အီတလီအတိတ်မှပြီးပြည့်စုံသော Subjunctive တင်းမာနေအသုံးပြုခြင်း
အီတလီအတိတ်မှပြီးပြည့်စုံသော Subjunctive တင်းမာနေ
by မိုက်ကယ်စန်းသော Filippo
အီတလီတွင် Congiuntivo Trapassato
subjunctive-တင်းမာနေကြိယာပုံစံများ၏စတုတ္ထဖြည့်စွက်ရန်, congiuntivo trapassato (အင်္ဂလိပ်အတိတ်စုံလင်သော subjunctive အဖြစ်ရည်ညွှန်း), တစ်ဦးဖြစ်သည့်ရှိပါတယ် တင်းမာနေဒြပ်ပေါင်း ။ ယင်းနှင့်အတူဤတင်းမာနေဖွဲ့စည်းရန် congiuntivo imperfetto အဆိုပါအရန်ကြိယာ၏ avere သို့မဟုတ် essere နှင့် အတိတ် participle ခေတ္တကြိယာ၏။
အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသောင်းချီ (ဈ tempi composti) ဤသို့သောအဖြစ်စကားလုံးနှစ်လုံး၏ရှိရေးကြောင်းကြိယာတင်းမာနေဖြစ်ကြ၏ passato prossimo (ပစ္စုပ္ပန်စုံလင်သော) ။
ယင်းကြိယာနှစ်ဦးစလုံး essere နှင့် avere ဝင်းတင်းမာနေဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ကြိယာကူညီပေးနေအဖြစ်လုပ်ရပ်။ (ကျနော်ခဲ့) IO sono stato (ကျနော်ခဲ့သည်) နှင့်ဟို avuto: ဥပမာ။
auxiliary ကြိယာ Avere
ယေဘုယျအားဖြင့်အကူးအပြောင်းကြိယာ (အရန်ဘာသာရပ်ကနေလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကျော်သယ်ဆောင်ကြောင်းကြိယာ တိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထု ) အောက်ပါဥပမာထဲမှာအဖြစ် avere နှင့်အတူ conjugated နေကြသည်:
il ပိုင်းလော့တာဟက်တာ pilotato l'aeroplano ။ (လေယာဉ်မှူးကလေယာဉ်ပျံ။ )
အဆိုပါ passato prossimo avere နှင့်အတူဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, အတိတ် participle ကျားသို့မဟုတ်အရေအတွက်အတိုင်းမပြောင်းပါဘူး:
io ဟို parlato con Giorgio ieri pomeriggio ။ (ကျနော်ဂျော့ခ်ျမနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းအားမိန့်တော်မူ။ )
Noi abbiamo comprato molte cose ။ (ကျနော်တို့အရာများစွာကိုဝယ်။ )
avere နှင့်အတူ conjugated တစ်ကြိယာ၏အတိတ် participle တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကရှေ့ပြေးအခါတိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထု lo, la, le, ဒါမှမဟုတ် li pronouns, အတိတ် participle ကျားနှင့်အရေအတွက်ရှေ့တိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထုနာမ်စားနှင့်အတူသဘောတူ။ ဤကြိယာအရင်အဦးနေရာပေမယ့်သဘောတူညီချက်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူးအခါအတိတ် participle တိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထုနာမ်စားမိုင်, ti, ci နှင့် vi နှင့်အတူသဘောတူလိမ့်မည်။
ဟို bevuto la birra ။ (ငါဘီယာသောက်၏။ )
သည် L'ဟို bevuta ။ (ငါကသောက်၏။ )
ဟို comprato il ရောင်းချအီး il PePe ။ (ငါဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းဝယ်။ )
လီဟို comprati ။ (သူတို့ကိုငါဝယ်။ )
ci hanno visto / visti ။ (သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော်မူ၏။ )
Molti မဟုတ်တဲ့ hanno pagato ။ (အတော်များများပေးဆောင်ကြဘူး။ )
အဘယ်သူမျှမမဟုတ်သောဟို ordinato una ပီဇာ။
auxiliary ကြိယာ Essere
ဘယ်အချိန်မှာ essere ကိုအသုံးပြုသည်, အတိတ် participle အမြဲတမ်းကြိယာ၏ဘာသာရပ်နှင့်အတူကျားနှင့်အရေအတွက်သဘောတူဒါကြောင့်သင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့လေးနောက်ဆုံးတွင်ရှိသည်: - o - တစ် - ကိုယ် - အီး။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင် intransitive verb ကြိယာ (ကတိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထု ယူ. မသွားနိုင်သောသူတို့ကို), ရွေ့လျားမှုဖော်ပြအထူးသဖြင့်သူများ, ထိုအရန်ကြိယာ essere နှင့်အတူ conjugated နေကြသည်။ အဆိုပါကြိယာ essere ကိုလည်းအရန်ကြိယာအဖြစ်သူ့ဟာသူနှင့်အတူ conjugated ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် trapassato congiuntivo အနည်းငယ်ဥပမာနေသောခေါင်းစဉ်:
Speravo che avessero capito ။ (ကျနော်သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ )
Avevo paura che မဟုတ်တဲ့ avessero risolto quel problema ။ (ကျနော်သူတို့ကပြဿနာပြေလည်ဘူးကြောက်။ )
Vorrebbero che io raccontassi una storia ။ (သူတို့ကတစ်ဦးပုံပြင်ပြောပြရန်ငါ့ကိုချင်ပါတယ်။ )
non volevo che tu lo così Presto facessi ။ (ငါသည်သင်တို့အဖြစ်မကြာမီထိုသို့ပြုမှလိုခငျြဘူး။ )
ကြိယာ AVERE AND ESSERE ၏ TRAPASSATO CONGIUNTIVO
che io avessi avuto fossi stato (-a)
che tu avessi avuto fossi stato (-a)
che lui / Lei / လဲ့ avesse avuto FOSS stato (-a)
che Noi avessimo avuto fossimo stati (-e)
che või aveste avuto foste stati (-e)
che loro / Loro avessero avuto fossero stati (-e)
Cualidad vs. Calidad
လူငယ်ဘာသာစကားကို 2015 ၏အကောင်းဆုံး
ဂျာမန်ကြိယာ - Kennen - သိ
ဘေးထွက်ပုံပြင်ခြင်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုပဲ့ပြင် De Dinan ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်ဘေးထွက်
ပြင်သစ်နံပါတ် - nombre
(ခရီးသွားမှ) ပြင်သစ်ကြိယာ "Voyager" Conjugate လုပ်နည်း
သင်ကအင်တာဗျူးမေးပါနိုင်သလား 10 မေးမြန်းချက်မေးခွန်းများ
နက္ခတ္တဗေဒ 101: အ Outer နေရောင်ခြည် System ကိုစူးစမ်းခြင်း
Albertosaurus အကြောင်း 10 အချက်အလက်
1976 ၏ထိပ်တန်းဆယ်ပါး Oldies
အဆိုပါ Vassa သီးသန့်
အဆိုပါ Dominant သဘောတရားရေးရာစာတမ်းကဘာလဲ?
Toda la información importante sobre el examen က de ciudadanía
ဘယ်လိုလက်မှတ်တွေ "ဟုအဆိုပါကြယ်မှုနှင့်အတူ Dancing" Get မှ
Gustave Flaubert လေ့လာမှုလမ်းညွှန်က "တစ်ဦးကရိုးရိုးနှလုံးသား"
ကောငျးကငျတ Azrael, ေူပာင်းလဲရေးကိုမင်းနှင့်သေ၏အိန်ဂျယ်တွေ့ဆုံရန်
တစ်ဦးပြီးနောက်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ Run ဖို့အတွက်ဘယ်လို
မည်သူမဆိုတစ်အိုင်ဗီလိဂ် School မှတစ်အွန်လိုင်းလက်မှတ်ရယူနိုင်သောနိုင်သလား
Die ဖို့လိုအဲဒီ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်5အာရှအမေရိကန်ပုံစံ